लुम्बिनी यात्रीज र दंगाली गोर्खाज विजयी – Sadarline
नेपालगन्जमा युवाका लागि कान्तिपुर न्यु लाइफ स्टाईल सुरु
न्यायालयको सेवाबारे डुडुवामा न्यायिक संवाद
नहर बगाएपछि स्थानीयवासी अँध्यारोमा
भेरी अञ्चल अस्पताल परिसरमा बृहद सरसफाई (फोटो फीचर)
बाँकेमा मंगलवार ३९ जनामा कोरोना पुष्टि, १७ डिस्चार्ज
सुर्खेतमा निषेधाज्ञा थप एकसाता बढाइयो
भू–माफियाको आँखा सार्वजनिक जग्गामा : कार्यकारी अधिकृत सापकोटा
लुम्बिनी यात्रीज र दंगाली गोर्खाज विजयी
८ बैशाख २०७५, शनिबार १९:४४
८ बैशाख, कोहलपुर (बाँके) : कोहलपुरको प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी ‘नेपालगन्ज कप’ टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको छैठौ दिन शनिवार भएका दुई खेलमा एबरोल टीएमटी लुम्बिनी यात्रीज र एनआईसि एसिया दंगाली गोर्खाज विजयी भएका छन् ।
शनिबार भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी यात्रीजले आर्शिवाद पेन्ट्स पाल्पा योद्याजलाई ४ विकेटले पराजित गरेको हो । लुम्बिनी यात्रीजले लगातार आफ्नो तेस्रो खेलमा तेस्रो जित निकालेको छ भने पाल्पा योद्याजले प्रतियोगितामा कुनै पनि जित दर्ता गर्न सकेको छैन ।
टस जितेर पहिला ब्याटिंग रोजेको पाल्पा योद्याजले २० ओभर पुरा खेल्दै ४ विकेटकै क्षतिमा १४४ रन बनाएको थियो । जस्का लागि रीत गौतमले ३२, अनुपम सिंहले १०, प्रनित थापा मगरले २८ बल खेल्दै अर्र्धशतक बनाएका थिए । त्यस्तै दिपेन्द« रावत र पाल्पाका कप्तान सिद्दान्तराज शाहीले समान २० रन बनाएका थिए । लुम्बिनी यात्रीजका लागि कुशल मल्ल र निजामुद्दिन हल्वाईले समान १–१ विकेट लिएका थिए ।
१४५ रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको लुम्बिनी यात्रीले १८.२ ओभरमा ६ विकेट गुमाउदै जित दर्ता गरेको थियो । लुम्बिनीका लागि ओपनर आदिल खानले ३५, विशाल खत्रीले २९, कुशल मल्लले १८, बासिर अहमदले ३१, निजामुद्दिन हल्वाईले १२ रन बनाएका थिए । लुम्बिनी यात्रीजका बासिर अहमद म्यानअफद म्याच घोषित भए ।
यसैगरी शनिवार नै भएको दोस्रो खेलमा एनआईसि एसिया दंगाली गोर्खाजले जिसान बांँके ब्लास्टर माथि ७ विकेटको जित हासिल गरेको छ ।
टस हारेर पहिले ब्याटिंगको निम्तो पाएको बांँके ब्लास्टरले निर्धारित २० ओभर पुरा खेल्दै ७ विकेटको क्षति १३२ रन जोडेको थियो । बांँकेका लागि विशाल केसिले ३९, रोमन बलामे २९, महेश क्षेत्रीले २६ रन बनाए । दंगाली गोर्खाजका लागि कप्तान संदीप सुनारले २ विकेट लिए ।
१३३ रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको दंगाली गोर्खाजले १८ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर जित हासिल गरेको हो । दंगाली गोर्खाजका लागि आक्रमक ब्याटिंग गर्दै हरि क्षेत्रीले मात्र १५ बलमा ४२ रन बनाए । त्यस्तै मनोज सुनारले ३९ बल खेल्दै ३९ रन र सदाम अन्सारीले २० बलमा २८ रन बनाए । दंगाली गोर्खाजका हरि क्षेत्री म्यानअफद म्याच घोषित भए ।
नेपालगन्ज कपमा ६ वटा टिम रहेका छन् । जस अन्तर्गत शीर्ष स्थामा ४ खेलमा ३ जित दर्ता गर्दै पप्पु कन्सट्रक्सन रोल्पा गोरिल्लाज पहिलो स्थानमा रहेको छ भने ४ खेलमा ३ जितसंगै एनआईसि एसिया दंगाली गोर्खाज रहेको छ । त्यसैगरि तेस्रो स्थानमा ३ खेलमा ३ जित दर्ता गर्दै एबरोल टीएमटि लुम्बिनी यात्रीज र चौथो स्थानमा अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गस, पाचौ स्थानमा जिसान बांके ब्लास्टर र पुछारमा आर्शिवाद पेन्ट्स पाल्पा योद्याज रहेका छन् । आईतवार हुने पहिलो खेल एबरोल टीएमटी लुम्बिनी यात्रीज र पप्पु कन्सट्रक्सन रोल्पा गोरिल्लाज बिच र दोस्रो खेल अर्घाखाँची सिमेन्टस बर्दिया टाईर्गस र जिसान बाँंके ब्लास्टरबिच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सदरलाइनडटकम ९ बैशाख, नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा शनिबार रातीदेखि मेयरकप वडास्तरिय रात्री कबड्डी प्रतियोगिता सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी टिम र दोस्रो खेलमा वडानं.४ विजयी भएका छन् । पहिलो खेलमा उप–महानगरको कर्मचारी टिमको नेतृत्व गर्दै मेयर डा. धवल शम्शेर राणाको टिमले वडा नं. १२ लाई ५४– […]
६ चैत्र २०७४, मंगलवार १८:५४
विद्युत चुहावट गर्न प्रयोग गरिएका ११ थान मिटर नियन्त्रणमा
५ श्रावण २०७५, शनिबार १६:२२
१९ पुष २०७६, शनिबार १३:५९
३१ भाद्र २०७७, बुधबार १७:४९